musha nyika dzakabatana Singers Lionel Richie Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts
CB inopa Nhoroondo Yese yeGlobal Mtukudzi ane nickname “Skeet". Our Lionel Richie Childhood Nhau pamwe Untold Biography Facts inounza iwe nhoroondo yakazara yezviitiko zvinoshamisa kubva paudiki hwake nguva kusvika pane.
Lionel Richie Wechidiki Nyaya.
Hongu, munhu wose anoziva ye rudo rwake rwakashata uye runotyisa bharlads ye1970s uye '80s. Zvisinei, vashoma chete ndivo vanofunga nezveLionel Richie's biography iyo inonakidza kwazvo. Zvino, pasina imwezve ado, ngatitangei.
Lionel Richie Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts: Upenyu Hwekutanga uye Mhuri
Kutanga kuenda, Lionel Brockman Richie Jr akaberekwa musi we 20th munaJune 1949 kuTuskegee kuAbama, USA Aive mumwe wevana vaviri vakazvarwa naamai vake, Alberta R. Richie uye kuna baba vake, Lionel Brockman Richie Sr.
Lionel Richie vabereki Alberta naLionel Sr.
Nyika yeAmerica yemadzinza madema neChirungu, Scottish, French neCanada midzi yakakurira mudhorobha rake muTuskegee, Alabama uko akakurira pamwe chete nehanzvadzi yake yega nehanzvadzi, Deborah Joyce Richie.
Lionel Richie akakurira kuTuskegee muAlabama.
Kukura kuTuskegee, Lionel akadzidza kuonga nekuita nhaka yemhuri yake mumimhanzi. Ambuya vake amai vamai vake, Adelaide Mary Brown aive wepiyano wekare uyo akamuzivisa iye kune zvakakosha zvemimhanzi achiri mudiki.
Muduku Lionel aivewo nemunun'una wake-aizivikanwa uyo akanga ari guru-band muimbi we jazz uye anoranger. Akatenga Lionel yake yekutanga saxophone uye akaenderera mberi kuti azive wechidiki nemitambo yemimhanzi yebhande.
Lionel Richie Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts: Dzidzo neKubata Buildup
Dzidzo yaLionel inosanganisira zvidzidzo zvake paJoliet Township chikoro chesekondari muJoliet, Illinois. Ndichiri pachikoro, Lionel akabatanidza vadzidzi pamwe neanofarira mimhanzi uye tenesi.
Lionel Richie (kuruboshwe) senhengo yechikwata chake chesekondari tenesi.
Paakapedza kudzidza kubva kuchikoro chesekondari, Lionel akagamuchira tennis yekudzidzira kuTuskegee Institute muAlabama, USA apo akawana Bachelor of Science degree mune zvehupfumi uye akazoenda kuAuburn University kuti apedze zvidzidzo zvekupedzisira.
Lionel Richie Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts: Basa Rokutanga Upenyu
Nhoroondo yebasa raLionel rekutanga mumimhanzi yakadzokera kumazuva ake ekoreji kuTuskegee Institute kwaakaumba akateedzana emapoka eR & B mukati ma1960. Panguva iyo Lionel akange ave zera 19 muna 1968, akazova muimbi uye saxophonist neboka rakanzi Commodores.
Mufananidzo waLionel Richie pamwe neCommodores.
Boka rakaburitsa yavo dambarefu album 'Machine Gun' ichiteverwa neayo anozvidaidza zita rekuti album, 'Commodores' iyo yakazove yakakurumbira uye yakagadzwa nhengo dzechipfeko setarisiro yekutarisisa muindasitiri yemimhanzi.
Lionel Richie Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts: Mugwagwa Mukurumbira Nhau
1981 ndiyo gore iro Lionel akaita chisarudzo chekugadziriswa kusingatariswi kuti aite basa roga roga mumimhanzi pasina kushanda sechikwata kumapoka eboka. Achifamba munharaunda iyo akaimba rwiyo rukuru rwemufirimu 'Endless Love' pamwe na Diana Diana.
Mufananidzo usingawanzoitika we "Endless Rudo" track kavha.
Mwedzi miviri mushure mokunge isunungurwa sechinhu chimwe chete, 'Endless Love' yakava rwiyo rwenyo rwakanyora kubudirira kwakakura nemaraketi ekuputira mu UK, Brazil, Australia, New Zealand Japan neCanada.
Lionel Richie Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts: Kumuka Mukurumbira Nhau
Akasimbiswa nekubudirira kwe'Endless Love ', Lionel akatanga rake solo basa mu1982 aine zita rekuzvida rakanzi "Lionel Richie". Iyo albhu yaive iine hit senge 'Chokwadi', 'Iwe Uri' uye 'Mudiwa Wangu' yakanyora kubudirira kukuru kwekutengesa nekutengesa anopfuura mamirioni mana emakopi.
Lionel Richie anozvidaidza zita rekuti album "Lionel Richie".
Nekudaro, dambarefu raLionel raitevera "Haikwanise Kunonoka" rakazove rakabudirira kupfuura rekare sezvo rakatengesa anopfuura makopi akawandisa zvakapetwa kaviri ndokuwana mibairo miviri yeGrammy inosanganisira Album yeGore. Vamwe vese, sezvavanotaura, inhoroondo.
Lionel Richie Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts: Relationship Life Facts
Lionel Richie akaroora kaviri. Tinokuudza chokwadi pamusoro pokudanana kwake, mararamiro uye hukama hwehukama huripo. Kutanga neshamwari yake yepambano, Lionel anozivikanwa kuti ave ane rudo rukuru neAmerica munyori wenziyo, Cynthia Weil vasati varoora mudzimai wake wokutanga Brenda Harvey.
Brenda naLionel vakasangana pavanenge vari kuchikoro chesekondari. Rudo rwavo rukabudirira pamusoro pemakore ekupedzisira mukubatana kwavo mumhuri yakachena mu 1975. Vaya vakaroorana vasati varoorana vaiva nemwanasikana akarerwa, Nicole Richie zvinhu zvisati zvasviba pakati pavo uye zvakatungamirira kurambana mu 1993.
Lionel Richie naBrenda Harvey vakaroora pakati pa1975-1993.
Achienda mberi, Lionel akawana mukadzi wake wechipiri, Diane Alexander mu 1986. Diane akanga ari mukadzi uyo Lionel aiva neukama hwemhirizhonga pamwe naye paaiva akaroorwa naBrenda Harvey. Mhuri yavo yakakomborerwa nemwanakomana, Miles Brockman Richie nemwanasikana, Sofia Alexandra Richie vasati vaparadzana mu2003.
Lionel Richie aine aimbova mukadzi Diane Alexander.
Nezvehukama hwake hwehukama huripo, Lionel ari muukama nemusikana wake, Lisa Parigi uyo anowedzera semuenzaniso uye mutengesi. Mhuri dzekudanana dzave dzichifambidzana kwemakore dzinodanana zvikuru uye dzinogona kutora hukama hwavo kune imwe nzvimbo inotevera.
Lionel Richie nemusikana wake Lisa.
Lionel Richie Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts: Upenyu hweMhuri Zvechokwadi
Lionel Richie anobva kumhuri yepakati-kati yemhuri. Tinokuudza chokwadi nezvehupenyu hwemhuri yake.
Nezve baba vaLionel Richie: Lionel Brockman Richie Sr aive baba vaLionel Jr. Akazvarwa pazuva re8th yaGumiguru 1915 uye akashanda semuongorori wehurongwa kuuto reUS. Kusvikira iye afa muna Gumiguru 1990, Lionel Sr aive anotsigira baba vaisimudzira zvido zvemwanakomana wavo mumimhanzi uye vakamupa rutsigiro rwehunhu panguva yaaida zvakanyanya.
Baba vaLionel Richie, Lionel Sr.
Nezve amai vaLionel Richie: Alberta R Richie aive amai vaLionel. Iye akazvarwa pazuva re27th raNdira 1917 uye akashanda semudzidzisi wepuraimari. Semudzidzisi, akange aine kuravira kwakanaka mukutaura uye kunyora Chirungu. Nekudaro, akasimbisa kushandiswa kwayo kwakakodzera pamba kusvika pakufa kwake muna 2001. Nechikonzero ichi, Lionel anokoshesa girama rakanaka sezviri pachena mukubvunzurudzwa kwake nemabasa ekugadzira.
Amai vaLionel Richie Alberta.
Nezve hama dzaLionel Richie: Lionel Richie haana hama asi hanzvadzi inonzi Deborah Joyce Richie. Imwe chete mukoma wako haashandisi zvakanyanya mumasangano ehupfumi. Somugumisiro, zvishomanana zvinozivikanwa pamusoro pake.
Lionel Richie pamwe nehanzvadzi yake Deborah.
Nezve hama dzaLionel Richie: Ari kure nemhuri yaLionel Richie, vanasekuru naamai vake vaiva Albert Davidson Foster naAdelaide M. Brown apo sekuru vake nasekuru vake vaive Charles A./E. Richie naIda J. Garfield zvakateerana. Iye zvakare aive nababamunini vadiki vanozivikanwa avo vakamuzivisa iye kune bhendi jazz achiri mudiki. Iko hakuna zvakawanda zvinozivikanwa nezve amaiguru vake, babamunini uye babamunini apo hama dzake dzisina kuzivikanwa muzviitiko zvinozivikanwa zveupenyu hwake hwepakutanga kusvika zvino.
Lionel Richie Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts: Personal Life Facts
Chii chinoita kuti Lionel Richie abike ... Gara kumashure apo isu tinokuunzira iko kugadzirwa kwehunhu hwake kukubatsira iwe kuti uve nemuzere mufananidzo wake. Kutanga, Lionel's persona musanganiswa weGemini Zodiac maitiro.
Ari nemanzwiro mumutambo, anokurudzirwa, anofungidzira uye anogovera ruzivo pamusoro pehupenyu hwake hwega uye hwega. Zvaanoda uye zvinokuvaraidza zvinosanganisira kuita shamwari, kufamba, kuimba, kurima, kuunganidza moto uye kushandisa nguva yakanaka neshamwari dzake nemhuri.
Kufamba ndeimwe yezvido zvaLionel Richie uye zvinokuvaraidza.
Lionel Richie Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts: Lifestyle Facts
Lionel Richie ane mari inofungidzirwa kuti inodarika madhora mazana maviri emamiriyoni panguva yekunyora. Kwakatangira hupfumi hwaLionel kunobva mukuyedza kwake kwemimhanzi uye bhizinesi rekushongedza pamba apo ongororo yemashandisiro ake mari inoratidza kuti anorarama hupenyu hwoumbozha.
Anotsanangurira hupenyu hwake hwepamusoro hunosanganisira $ $ MHMUMX mamiriyoni eItaly yekuzvarwa patsva muBeverly Hills. Imba yacho inoratidzika semakamuri akaisvonaka uye garaji guru.
Chikamu chechikamu cheimba yaLionel Richie muBeverly Hills.
Uyu muimbi weimba anoratidza kutora kwake kunodhura uye kwechikoro mumotokari kuburikidza nevatasvi vemabhiza anosanganisira Datsun 280Z, Mercedes 450 SEL, Range Rover L322, Porsche 930 uye Ferrari Scaglietti.
Lionel Richie achikumbira naiye Ferrari Scaglietti.
Lionel Richie Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts: Untold Facts
Kuputira yedu Lionel Richie mwana wehupenyu nhau uye biography pano ndezvechokwadi izvo zvisingabatanidzi muhupenyu hwake.
Lionel Richie akaberekwa wechiKristu uye akakurira seEpiscopalian. Muzvokwadi, aida kuva mupirisita weEpiscopalian asati anofarira mumimhanzi yakavhara chido chake chekudzidza uMwari.
Argentina mhirizhonga uye imwe yemutambo mukuru webhola, Lionel Messi akatumidzwa zita raLionel Richie. Izvo zvinopera pasina kutaura kuti vabereki vaMesiya vaive vateveri vakuru vemuimbi veteran.
Nyeredzi yeBarcelona Lionel Messi akatumidzwa zita raLionel Richie.
Iyo veteran actor ndeyomuchero wekare wevanyori vechikoro vasina mifananidzo. Uyewo haasi kusvuta panguva yekunyora. Zvisinei, anonwa zvine mwero.
Haazive kuverenga kana kunyora mimhanzi asi chokwadi anoziva masimba ehunyanzvi.
Lionel akabatana kunyora iyo 1985 yerudo isina kuroorwa "Tiri Nyika" naMichael Jackson, nzira yakatengesa anopfuura mamirioni makumi maviri emakopi.
Lionel Richie Co-akanyora "Isu Tiri Nyika" naMichael Jackson.
Lionel Richie Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts: Video Summary
CHOKWADI KUTI: Thanks for reading vedu Lionel Richie Childhood Story plus untold biography zvinyorwa. At biography yemwana, isu tinoedza kururamisa uye kururamisa. Kana iwe ukaona chimwe chinhu chisingatarise zvakanaka muchinyorwa chino, ndokumbira utaure kana taura nesu!